HALKAAN KA AQRISO W/WARGEYSKA MOGADISHU TIMES 18-JULY 2021
Sunday July 18, 2021 - 08:49:53 in Wararka by Mogadishu Times
Dowladda soomaaliya oo diidday "war bixinta guddiga qiimeynta madaxa bannaan ee midowga afrika"
Dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan sayrtay war bixin lagu faafiyay baraha bulshada oo la she egay in ay kasoo baxday Guddiga Qiimaynta Mad axa Bannaan ee Midowga Afrika, taasoo looga had lay arrimo ku saabsan howlgalka AMISOM iyo xaa ladda Soomaaliya.
War kasoo baxay xuk uumadda ayaa lagu she egay in golaha Wasiirra da ay shir deg deg ah ka yeelanayaan arrintan, dhawaanna bayaan kasoo saari doonaan.
Ma jirto war bixin rasmi ah oo uu soo saaray Midowga Afrika, hase yeeshee D/Soomaaliya ayaa sheegtay inay diidday waxyaabaha ku jira war bixintan. Sida ku xusan qoraalka, Guddiga Qi imaynta Madaxa Bannaan ee ururka Midowga Afr ika ayaa warbixintan oo ka kooban 35 bog ku sha rraxay xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo arrimo ay sheegeen inay ogaadeen xilligii ay qiimaynta wadeen.
Waxay "guddigu" sheegeen inay qiimaynta bill aabeen iyagoo ka tallaabo qaadaya qaraarradii ka soo baxay G/Ammaanka ee Q/Midoogay, oo kala ahaa 2520 iyo 2568 (2021)
Arrimo ku saabsan Soomaaliya iyo saamaynta ha nnaanka guud ee dowlad dhisidda Faahfaahin ku saabsan xaaladda amni ee Soomaaliya Howlg alka Midowga Afrika ee Soomaalia (AMISOM)
Xogo la ogaaday Talooyin
Warbixintan ayaa lagu sheegay in qabiillo ay wali saamayn ballaaran ku leeyihiin dhinac walba oo ka mid ah hannaanka siyaasadeed ee Soo maaliya.
Sidoo kale waxaa lagu qeexay warbixinta in ga cmo shisheeye ay faraha kula jiraan howlaha la xiriira horumarka Soomaaliya.
Dhinaca ammaankana, "Xaaladda amni ee So omaaliya way xasilan tahay balse ma aha mid la saadaalin karo", ayaa lagu yidhi war bixinta.
"Ma jiraan dhismeyaal maamul oo ay dowlad da leedahay, sida maxkamado iyo saldhigyo boo lis, xarumo caafimaad, kuwo wax barasho iyo go obo kale oo loogu adeego shacabka," ayaa ka mid ahaa erayada ku jira war bixinta la sheegay inay kasoo baxday guddiga Midowga Afrika.
"Caqabadda aasaaska ah ee hor taagan xasil oonida Soomaaliya waa in DF iyo D/G/yada ay ku guul darraysteen dhammastirka dastuurka qabyo qoraalka ah, xal u helista awood qaybsiga iyo wa daagista kheyraadka", ayaa lagu yidhi war bixinta.
Midowga Afrika oo si kulul uga hadlay muddo kordhinta Farmaajo Talooyinka lagu soo jeediyay waxaa ka mid ah in wixii ka dambeeya 2021 howlgalka Amisom la gu wareegiyo MAfrika iyo QM oo wadajir ah. Ama in Soomaaliya la geeyo ciidamada heeganka ah ee Bariga Afrika. Sidoo kale waxaa waddooyinka furan lagu daray in Amisom ay ka baxdo Sooma aliya ka dibna mas'uuliyadda Amniga lagu waree jiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Ilaa hadda ma cadda qodobbada gaarka ah ee ay ka biyo diidday dowladda Soomaaliya, iyadoo laga war dhowrayo jawaabta faahfaahsan ee ay xukuumadda ballan qaadday.
Qoraalka ayaa ku soo aaday xilli Soomaaliya ay hadda ku mashquulsan tahay arrimaha doora shada oo in muddo ah soo jiitamayay
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo ka hadlay Ja dwalka ay soo saareen Guddiga Doorashoo yinka
R/Wasaaraha DF Md.Maxamed Xuseen Ro oble ayaa soo dhaweeyay Jadwalka hanaanka do orashooyinka 2da aqal ee Baarlamaanka Sooma aliya ee ay soo saareen guddiga doorashooyinka heer Fedaraal ee FEIT.
"Waxaan soo dhaweynayaa oo bogaadinayaa jadwalka ay shaac iyeen guddiga maamulka doorasho oyinka ee heer federaal, kaas oo si fa ahf aahsan u qeexaya xilliy ada iyo qaabka ay u dhace yso doo rashada Aqalka Sare iyo G/S/hBaarlamaan ka FS” ayuu yiri R/wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
R/wasaare Rooble ayaa sidoo kale D/goboleedy ada dalka uga mahad ce liyay dadaalkooda iyo dabacsanaanta ay muuj iyeen, islamarkaana ugu baaqay iney ku dhaasad aan hirgelinta qabsoom ida doorashooyinka.
"Shacabka Soomaaliyeed waxa ay naga suga yaan doorasho nabdoon, daahfuran oo ka fog eex iyo qof jecleysi, kuna dhacda xilligii lagu heshii yay, sidaas darteed waa in aan iska wada xilsaar naa hirgelinta howshaas muhiimka ah, si aan dib u dhac lahayn” ayuu yiri Raysal wasaare Rooble.
Gabagabadii RW/Soomaaliya Md. Rooble ayaa beesha caalamka uga mahadceliyay kaalintooda nabadeynta iyo dowlad dhiska Soomaaliya, waxu una ugu baaqay in ay taageeraan howsha hirgelin ta doorashoyinka dalka.
Taliyaha Booliska Oo Amar Siiyay Ciidanka Ilaaliya Amniga Garoonka Aadan Cadde
Taliyaha Ciidanka Booliska Garoonka Aadan Cadde iyo Maareeyaha Maamulka Guud iyo Amn iga Garoomada Soomaaliya oo kormeeray gooba ha ay ka howlgalaan ee Ga roonka ayaa kula Dar daa rmay inay sii laba laabaan Sugidda Amniga Garoonka.
Ciidamada Booliiska ee ka howlgala gudaha iyo banaanka iyo irridda hore ee laga soo galo ga roonka ayaa qeyb weyn ka qaata howlaha lagu su gayo amniga gaar ahaan barista gaadiidka rakaab ka, dadka howlaha gana csiga iyo hay’addaha ka le ee howl-maalmeedko oda caadiga ah u taga Ga roonka Aadan Cadde.
Taliyaha Ciidanka Booliiska Garoonka Aadan Cadde Cabdifataax Bashiir Cali oo uu wehliyo Ma areeyaha Maamulka Guud iyo Amniga Garooma da Soomaaliya Cabdinaasir Maxamuud Gurey ay aa kula dardaarmay ciidamada in ay ku dadaala an cabsida Alle, iyo xaqdhowrka muwaadiniinta ay shaqooyinka u hayaan.
Booliska ayaa waxa ay mas’uuliyad ka saran ta hay illaalinta shacabka amniga gudaha waxaa dna ka dareemi kartaa ama aad ku arkeysaa in ay yihiin kuwa si ilbaxnimo, waayo aragnimo iyo xil kas ula macaamilaya muwaadiniinta Soomaaliy eed mansabkasta oo ay leeyihiin.
Duqa Muqdisho oo xariga ka jaray dhismaha waddo dhibaato lagu qabay
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa M/Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa Shalay xariga ka jaray dhismaha la gu sameeyay wadada Laamiga ee hormarta War shada Caanaha ee Degmada Hodan.
Wadadaan oo aheyd mid bur-bur ku yimid isla markaana dhibaato xoogan oo dhanka isku so codka ah ay ku qabeen shacabka ayaa muddo ko oban lagu dhisay iyadoo laga jawaabayo cab ashada Shacabka, sida.lagu sheegay War kasoo baxay Maamulka Gobolka Banaadir.
Duqa Muqdisho ayaa kula dardaarmay Bulsha da in ay ka shaqeeyaan sidii ay u ilaashan lahaay een Dhismaha lagu sameeyay Wadadaan Laami ga ah isla markaana ay ugu shaqeyn lahaayeen Bilicda iyo Nadaafada.
Maamulka Gobolka Banaadir ee uu Hogaami yo Guddoomiye Cumar Maxamuud Maxamed (Cu mar Filish) ayaa horey u fuliyay Mashaariicyo bad an oo dib u dhis loogu sameenayo wadooyinka Laamiga ah ee Magaalada Muqdisho, hayeeshee waxaa jira wadooyin badan oo qarka u saaran in ay go’aan, kuwaas oo dhibaato ay ku qabaan dad ka Shacabka.
Madaxweynaha maamulka K/Galbeed C/ca siis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa Shalay xarigga ka jaray Xabsiga Dhexe ee Magaalada Baydhabo, kaasoo si casri ah loo dhisay, waxa ana dhismaha mashruucaan fulisay Wasaaradda Cadaaladda Xukuumadda Soomaaliya.
Munaasabadda xarig jarka auaa waxaa goobjo og ka ahaa Wasiiro ka tirsan Xukuumadda, Xafii ska RWasaaraha, Taliyaha Ciidanka Asluubta iyo mas’uuliyiin ka tirsan Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed
Madaxweynaha DGK/Galbeed Md. Cabdicasiis Laftagareen ayaa xariga ka jaray Xabsiga M/Ba ydhabo, wuxuuna amaanay kaalinta wanaagsan ay dhismahan ay ka qaadatay DFS.
Dhismaha Xabsigan ayaa qeyb weyn ka qaa danaya xoojinta amniga iyo kor u qaadista dhaq an celinta maxaabiista. xabsiga dhexe ee Bay dhabo oo xariga laga jaray
Xildhibaan Jeesow oo shaaciyey inuu tegay xarunta NISA iyo wixii uu kasoo ogaaday arrinta Ikraan Tahliil
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka tirsan golaha shacab ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo muddo ka badan labo toddobaad la la’yahay, ayaa codsi u diray bulshada iyo hey’adaha kala duwan ee do wladda Soomaaliya, isagoo ka dalbaday in si wa dajir ah looga qeyb qaato baadi goobka Ikraan oo nolol iyo geeri lagu la’yahay.
Xildhibaan Jeesow oo tilma amay inuu yahay mudanaha ba arlamaanka ku metela Ikraan Ta hliil ayaa sheegay in looga wac ay xarunta taliska hey’adda NISA, islamarkaana la tusay muuqaal muujinaya gaarigii ay raacday Ikraan, markii cid ugu war da mbeysay.
Sidoo kale Xildhibaanka ayaa sheegay in la aq oonsaday gaariga ay raacday Gabadha maqan, kaas oo laga lahaa taliska NISA, islamarkaana ay socdaan baaritaano ku saabsan sidii loo ogaan la haa halka lala aaday gabadha.
Xildhibaan Daahir Jeesow ayaa bulshada Soo maaliyeed ka codsaday in la joojiyo wararka aan xaqiiqada aheyn ee baraha bulshada lagu faafin ayo, islamarkaana cidii xog ka heysa gabadhaas ay asaga si gaar ah ula soo wadaagto. Xildhibaan ka ayaa soo bandhigay lambarka taleefankiisa ee lagala soo xariiri karo, waxuuna bulshada ka co dsaday inay la soo xariirto cidii war ka heysa Ik raan nolol iyo geeri.
"Waxaan ka codsanayaa umadda Soomaaliye ed,gaar ahaan cidii wax macluumaad ah ka heysa meesha ay ku sugan tahay gabadhaas, in anigoo ah Adeerkeed, Xildhibaankeeda, ay ila soo xariir to, arrintaan waa na xanuujineysaa naga daaya wararka aan saxda aheyn, gaar iila soo xariira xa taa hadii wax la qarinaayo ay jiraan ila soo wadaa ga aniga,” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Jeesow.
Waxa hotelka Maansoor ee M/Hargaysa lagu soo bandhigay buuga Hawaale Warran oo uu qor ay abwaan Maxammed Ibraahin Warsame (Had raawi).
Abwaanka ayaa buugan kaga sheekaynaya
noloshiisa, taariikhda Soomaalida gumaystihi ka hor, ka dib, dowla di kacaanka, bur burkii iyo must aq balka.
Inkasta oo uu Ha draawi xanuunsa na oo aanu xaflada iman hadana waxa soo buux dhaafiyay ku manaan qof oo ku koray dhagaysiga suugaanta qarniga ah ee abwaanka.
Waxa kale oo goobta joogay saraakiil xukuum ada Somaliland ka tirsan, madaxda mucaaradka, bulshada rayid ka ah, dhaqan yaqaano iyo sax iibadii qadiimiga ahaa ee Hadraawi.
"Maxammed Ibraahin Warsame macalin jog to ah ayuu aha, la socodkiisa ayaad wax ka baran aysay" sida waxa Hadraawi ku sifeeyey qoraaga caan ka ah ee Boobe Yuusuf Ducaale oo ay sax iibo dhaw yihiin abwaanka.
Pro: Xuseen Bulxan oo abwaanka aqoon gaa ra uleh, ayaa isna sheegay in Hadraawi uu ka tag ayo dhaxal ma guurto ah.
"Hadraawi waxa uu inoo qabtay inaga iyo jiila sha soo socda lama tirin karo" ayuu yidhi.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wa ddani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, ayaa sifeeyay waxtarka iyo wax qabadkii Hadr aawi.
"Hadraawi wuxuu aha macalin, wuxu ahaa ab waan, wuxuu aha halgamaa" ayuu yidhi.
"Hadraawi wuxuu aha samafale, anigoo saf aaradii Moscow jooga ayuu ila soo hadlay si nin mujaahid aha aan dhakhtar u geeyo" ayuu hada lkiisa ku daray.
Wasiirka arrimaha gudaha Maxammed Kaahin Axmed, ayaa sheegay in Hadraawi uu ahaa abw aan aan ku bakhayli jirin in uu sheego libta suug an yahanka kale.
"Had iyo jeer suugaanyahanku way tartama an, nin Hadraawi bakhayl kama aha in uu qiro ra ga suuganyahan ka ah" ayuu yidhi.
Hadraawi ayaa ah mid kamida suugaan yahanada ugu waa wayn ee taariikhda casriga ah ee Soo maalida
Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi Garabka Ca bdi Xaashi oo eedeeyay RW Rooble
Siyaasiyiinta kasoo jeeda Gobolada Waqooyi ee loo yaqaan Somaliland garabka uu hoggaami yo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cabdi Xaashi C/hi ayaa R/Wasaaraha XFS ee xilgarsiinta Max amed Xuseen Rooble waxaa ay ku eedeeyeen in uusan dhex-dhexaad aheyn arrimaha doorashooy inka
Qoraal kasoo baxay Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi Garabka Cabdi Xaashi ayaa waxaa lagu sheegay in Ra’iisul Wasaare Rooble loo xilsaaray xal ka gaarista khilaafka u dhaxeeya Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi oo ay kala hoggaaminayaan Cabdi Xaashi & Mahdi Guuleed balse nasiib darro aysan dhicin taasi oo muddo hadda laga joogo Bil & 20 Cisho ka hor loo xilsaaray.
Sidoo kale qoraalkooda waxaa ay ku sheege en in Guddoomiye Cabdi Xashi uu dhowr jeer ta leefon kula xiriiray Ra’iisul Wasaaraha, sidoo kale uu qoraalo u diray balse uusan usoo jawaabin, in taasi kadibna ergo uu u diray kadib ay sababtay in ay kulmaan RW Rooble & guddoomiye Cabdi Xaa shi 19kii Bishii June, isla markaana ay ku balame en in Saddexda Xubnood ee lagu daray Xubnaha Guddiga doorashada Soomaliland inay noqdaan kuwo dhex-dhexaad ah oo an ka qeyb gelin door ashada Guddoonka guddiga doorashooyinka Soo maliland & in Guddiga laga saaro Shaqaalaha do wladda & Ciidamada balse taasi ay dhici weysay, isla markaana uu jebiyay dhamaan balan qaadki isii.
Ugu dambeyn Siyaasiyiinta kasoo jeeda Gobo lada Waqooyi ee loo yaqaan Somaliland garabka uu hoggaamiyo Guddoomiyaha Aqalka Sare Cab di Xaashi ayaa waxaa ay ugu baaqeen R/ Wasa araha in uu ficil ahaan u fuliyo ballan qaadkiisii iyo gudashada mas’uuliyadii lagu aaminay, iyaga oo sidoo kale ugu baaqay inuu qabto kulan go’an mid eysan looga garayo arrimahaan hoose ee taagan, kuwaas oo kala ah.
1: Mideynta guddoonka guddiga doorashooyin ka Somaliland oo xaaladaha aanu kor ku soo she egnay sababeen in uu kala jabo oo labo guddoon yeesho.
2: Habraacyada gaarka ah ee Doorashada Xil dhibaanada labada aqal ee ka soojeeda Somalil and In laysla meel dhigo Goobta Doorashada iyo amnigeeda.
3: Maamulka Guud ee Doorashada iyo hagi deeda.
Ugu dambeyn om iyaga dhinacoda ay mar wal ba diyaar u yihiin in ay si dhow ugala shaqeayaan R/Wasaaraha sidii xal kama dambeys ah loo gaari lahaa, laakiin ay sheegeen inay u muuqato in R/ Wasaaruhu dhinac u xaglinayo ama aanu isaga la ftiisu xor u ahayn hirgelinta ballamihiisa marka la jooga arrimaha doorashada xildhibaanada labada gole ee kasoo jeeda Soomaaliland.
Koox Hubeysan Oo Xalay Dil Ka Fulis ay Xaafad Ka Tirsan Baladweyne
Kooxo ku hubeysnaa Bastoolad ayaa fiid nimadii Xalay gudaha M/Baladweyne ee Xarunta G/Hiiraan ku dilay Askari ka tirsanaa Ciidanka DFS ,Dad ayaa waxay ku warrameen in Askariga uu u geeriyooday rasaas ay ku fureen rag dhalin yaro oo watay Bastoolad, xili uu saarnaa Mooto Bajaaj mareysay xaafadda Kooshin ee Balad weyne.
Askariga la khaarijiyey ayaa waxaa lagu mag acaabi jiray Xasan Maxamuud Qeyleeye, isla mar kaana waxaa durbo goobta ka baxsaday ragii ka dambeeyay falkaas ka dhacay xaafadda Kooshin.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in Xalay Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Hirshabeelle ay howlgal baaritaano ka wadaan M/Baladweyne, welina ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay Maa mulka Magaalada.
Si kastaba M/Baladweyne ee Xarunta G/Hiira an ayaa waxaa horey uga dhacay weeraro iyo di lal qorsheysan oo lagu dilay Askar, Mas’uuliyiin iyo xubno kale, waxaana inta badan falalkaas sheegtay Al-shabaab
Dood ka dhalatay Coldoon oo u istaagi waayey calanka Somaliland iyo jawaabtii uu ka bixiyey
Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah weriye sa ma-fale ah oo ka howlgala gobollada waqooyi ee Somaliland ayey saacadihii las oo dhaafay hadal-he yntiisu aad ugu fa aftay baraha bul shada, kadib mar kii uu Habeen hore u ista agi diiday astaan ta calanka Somaliland.
Cabdimaalik Coldoon oo la hadlay TV-ga Horn Cable ayaa ka jawaabay sababta uu ugu istaagi waayey heesta calanka Somaliland, markii laga yeeriyey munaasabad lagu soo bandhigayey Bu ug uu qoray Abwaan Maxamed Warsame Hadra awi. Sawirka Cabdimaalik oo fadhiya iyo dadkii ka le ee ka soo qeyb galay munaasabadaas oo u ista agay astaanta calanka ayaa aad loogu faafiyey baraha bulshada, waxayna dadka badankood tall aabadaas ku macneeyeen in Cabdimaalik uusan aqoonsaneyn calanka Somaliland.
"Wax kasta oo aan qabaneyno waa in aan u eegno waxa ay ka qabto diinteena Islaamka, laak iin aanaa ka eegin dadku saas ayey sameeyeene aan ku daysano, anigu waxa aan ku dhaqmay wa xa aan ka fahmay diinteena Islaamka, waxaana diinteena ka fahmay in Khushuuca uu Ilaahey iska leeyahay,” ayuu yiri Cabdimaalik Coldoon.
Sidoo kale Coldoon ayaa sheegay in calan ama cid kale aysan u qalmin in loo Khushuuco, "Waxaan ugu istaagi diiday cab si aan nafteyda uga baqayey in aan ku dhaco wixii ilaahey iga reebay,taxadar ayey iga aheyd, waana in bulshadu ay ku baraa rugto arrintaan,” ayuu yiri.
Mar wax laga weydiiyey guuxa bulshada ee ah in Cabdimaalik uusan aqoonsaneyn jiritaanka calanka Somaliland ayuu ku jawaabay, "Maya cal amadu waa isugu keymid, ma jiro calan aan u ista agi lahaa, Ilaahey dartiis ayaan wax u naceynaa, ilaahey dartiis ayaan wax u jeclaaneynaa,” ayuu yiri Cabdimaalik Coldoon.
Heshiis la kala dhex-dhigay laba malee shiyo Beeleed oo dagaalamay
Waxaa M/Qardho ee G/Bari lagu qabtay shir lagu gaba-gabaynayay shir dib u heshiisiin ah oo u dhaxeeyay labo beelood oo walaalo ah kuwaas oo shaqaaqo ay ku dhex-martay miyiga degmada Isku-shuban ee Gobolka Bari
Shirkan ayaa waxaa goobjo og ka ahaa, Odayaasha Dhaqan ka labada Beelood, Culuma’udiin, Waxgarad iyo Saraakiil ka tirsan Maamulka Puntland, waxaana laga soo saaray go’aano ku saabsan in markale aysan labada dhinac dagaalamin.
Shirka ayaa waxaa lagy go’aamiyay xukunka magta ama diyada dadkii dagaalka labada beelo od ku geeriyooday, in laga hortago waxkasta oo dib u soo celin kara dagaalka & in siwadajir ah lo oga wada Shaqeeyo nabadda.
Qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka labada Beelood oo shirka ka hadlay ayaa soo dhaweeyay heshiiska, waxaana ay balan qaadeen inay dhaq an gelin doonaan qodobada lagu heshiiyay.
Muddo todobo bilood ah ayay socdeen shirar la xiriira sidii loo soo afjari lahaa colaada soo laab laabatay ee kajirtay degmada Isku-shuban ee Go bolka Bari, taas oo u dhaxeeysay laba maleeshiyo Beeleed.
Ciidamada Dowladda & kuwa Galmudug oo la wareegay Bacaadweyne
Ciidamada DFS, kuwa Galmudug oo ay wehl inayaan dadka degaanka oo hubeysan ayaa dib ula wareegay degaanka Bacaadweyne ee K/ G/Mudug, halkaas oo ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa Ciidamada huwan ta ah waxaa ay dhaq dhaqaaqyo Ciidan ka wade en duleedka degaannada Bacaadweyne iyo Wisil, hayeeshee Ciidamada dowladda ay la wareegeen degaanka Bacaadweyne kadib markii ay isaga baxeen Al-Shabaab.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada dowladda qeyb ta 21aad ayaa sheegay in ay si nabad ah kula war eegeen degaanka, isla markaana ay xaqiijiyeen guud ahaan amniga degaanka Bacaadweyne iyo degaannada hoostaga.
Wararka laga helayo degaanka Bacaadweyne ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada dowl adda iyo kuwa Daraawiishta Galmudug ay howlga llo miino baaris ah ka wadaan degaanka Bacaadw eyne iyo duleedkeeda ee Koonfurta Go